Goldman Sachs na-atụ aro ịzụta Apple mbak | Esi m mac
Goldman Sachs na-atụ aro ịzụta Apple mbak
Apple ọ nwere ike ịkpọsa ndekọ na ndekọ karịrị onwe ya kwa afọ, na-ewebata ngwaahịa na-aga nke ọma mgbe niile. Goldman Sachs agbaghawo ọdịnala nke ịghara ịkwado òkè nke ụlọ ọrụ ọ bụla, ma mee nke a site na ịnye ndị ahịa ya akwụkwọ ozi na nkwenye siri ike iji zụta Apple 'AAPL', dabere na ikike Apple nwere maka uto na-aga n'ihu. "Site na ntọala nke 500 nde ndị ọrụ iPhone na-eguzosi ike n'ihe, anyị na-ahụ ohere dị ukwuu nke ọtụtụ afọ maka Apple ịbawanye ego ya", dị ka ihe edere site na Goldman Sachs na-ekwu.
Goldman Sachs ebipụtawo na nke a arụmụka dịgasị iche iche ma ebe a bụ echiche ha:
Apple anaghị arụ ọrụ nke ngwanrọ ya ruo oke.
Enwere ikike nkwekọrịta nkwekọrịta azụmahịa, dịka Amazon Prime.
Apple TV ọhụrụ nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ n’ọdịnihu.
Ahịa nke akụrụngwa ya ka siri ike.
Karịsịa Goldman Sachs nwere obi ụtọ banyere ikike a na-akpọ "Apple-dị ka-a-Ọrụ" (Apple dị ka ọrụ), ebe ị na-eji ngwaike gị iji ree ikike nke ngwanrọ gị, dị ka ndenye aha ọzọ dị ka Apple Music na a ngwugwu TV ga-ekwe omume maka Apple TV ọhụrụ. Na nke a Apple na-eji ohere ọ nwere enweta ego site na obere pasent nke ndị ọrụ iPhone, ụlọ ọrụ ego na-atụ aro na Cupertino nwere ike irite ọbụlagodi $ 7.6 ijeri revenue kwa ọnwaOh chim nke a bụ ego, na uru.
Isi Iyi [Business Insider]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Goldman Sachs na-atụ aro ịzụta Apple mbak
Etu esi elekọta Siri Remote site na ntụpọ ọghọm
Lọ Nzukọ nke Maara Aha, nweta ngwa 11 na ọnụahịa ị chere na ọ dị mma